WC 2015: Zimbabwe squad announced, Elton Chigumbura to captain - myKhel
Home » Cricket » News »WC 2015: Zimbabwe squad announced, Elton Chigumbura to captain
WC 2015: Zimbabwe squad announced, Elton Chigumbura to captain
Harare, Jan 8: Zimbabwe on Wednesday (January 7) announced their 15-men squad for the ICC World Cup to be held in Australia and New Zealand in February and March. The side will be captained by 28-year-old Elton Chigumbura who was also the skipper of the Zimbabwean side in 2011.
THE CHOSEN ONES!! #downforcricket pic.twitter.com/dn8JI9PvOw
— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) January 7, 2015
Zimbabwe's batting will revolve around Hamilton Masakadza, who will be playing in his first World Cup despite making the international debut 14 years ago, Brendan Taylor, Craig Ervice, Sean Williams and Sikander Raza.
The bowling department will be led by pacers Tinashe Pangyangara, Tendai Chatara, Twanda Mupariwa and spinners Tafadzwa Kamungozi, Stuart Matsikenyeri and Raza who is also an off-break bowler.
ZIMBABWE SQUAD FOR WC 2015:
ZIMBABWE'S ITINERARY AT WC 2015:
vs South Africa (Feb 15), vs UAE (Feb 19), vs West Indies (Feb 24), vs Pakistan (Mar 1), vs Ireland (Mar 7), vs India (Mar 14)
Read more about: cricket icc world cup 2015 zimbawe sports wc squad
Story first published: Thursday, January 8, 2015, 10:59 [IST]